उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, अब कुन-कुन क्षेत्र खुल्छन ? « Postpati – News For All
उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, अब कुन-कुन क्षेत्र खुल्छन ?
भदौ २४, काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो हुने भएको छ । निषेधाज्ञाका मोडालिटी उपत्यकाका तीनै जिल्लका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले परिवर्तन गरेका हुन् ।